Echefula usoro aghụghọ 5 a nke ohuru nke PUBG Mobile | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Egwuregwu gam akporo, PUBG Mobile, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Ọhụrụ update bụ ebe a, na na ya na ị ga-ahụ a usoro aghụghọ ị nwere ike ịmaghị ma ọ bụ elegharala anya maka PUBG Mobile. Egwuregwu Tencent, onye nkwusa n'azụ PUBG Mobile, agbakwunyela atụmatụ ọhụrụ ndị dị ezigbo mkpa na mmepe ọgụ na ndị na-apụtaghị nke ọma dị ka ndị ọzọ.
Anyị ga-achọpụta ihe bụ aghụghọ aghụghọ 5 ahụ nke ọhụụ PUBG Mobile ọhụrụ ị ghapụrụ ileghara anya. Imepe aru, ugbua ugbua ndị "otu-egbu" ga-enwe ya siri ike karị, ebe ọ bụ na ugbu a, ụgbọ ala ahụ anaghị emebi ndị otu nke otu ahụ. Ka anyị soro ndị ozi 5 ahụ dị mkpa karịa.
1 Mata ọkwa nke onye iro ma ọ bụ otu ihe na ndị otu gị
2 Gbọala anaghịzi emebi ihe
3 Gbanwee shards maka ọla ọcha
4 Nwere ike ibugharị ihe niile na HUD
5 Gwuo Miramar na ọnọdụ Arcade
Mata ọkwa nke onye iro ma ọ bụ otu ihe na ndị otu gị
Anyị achọghị ịhapụ oge ahụ iji kwado ka ị gaa Ndụmọdụ ise ndị a ka ị bụrụ onye egwu kacha mma na PUBG Mobileewepu na ebe ọ bụ na mmelite ọhụrụ ahụ i nweziri ike ime ka onye iro mara ihe ị na-eme. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ị nwekwara ike iji ihe ndị ịchọtara n'ụzọ gị mee ya.
Emere ya dika nke a:
Chọta onye iro ahụ na pipụ olulu ma ọ bụ n'ụlọ ebe ọ nọ.
Open na-emeghe ngwa chat nhọrọ na ị họrọ "Ndị iro n'ihu!".
Akara ngosi pụrụ iche ga-egosi nke ahụ ha ga-enwe ike ihu ụmụ klas gị ndị ọzọ ma otu a mara ebe onye-iro nọ.
I nwere ike ime otu ihe ahụ ya na iwu «m nwere ndokwa»:
Chọta ihe n’ala na pipụ olulu.
Open mepee nkata ngwa ngwa, ị ga-ahụ otu esi ihe a na egosi na odo na ị na-elekwasị anya n'akụkụ "Enwere m ndokwa."
Pịa na nhọrọ na aha ihe ahụ, ọkwa ya na akara ngosi Baajị ebe ga-egosi ndị agha gị.
Ọ bụ ezigbo enyemaka maka ndị otu ọ bụla gaa ozugbo na ihe ya mere na anyi ekwesighi imebi oge ide. Ọbụna ọ na-aba uru ma ọ bụrụ na anyị ejiri igwe okwu, ebe ọ bụ na ntụnye ahụ na-ahụ anya ma na-egosi ọkwa ya.
Gbọala anaghịzi emebi ihe
Ọzọ nke kasị mma aghụghọ site na mmelite PUBG ọhụrụ bụ nke ahụ ugbo ala adighizi emebi mgbe otu onye otu na-eme gị ihe na-akpasu gị iwe. Ọ bụ otu n'ime egwuregwu kachasị njọ nke onye otu nke otu gị nwere ike ịme gị na nke ahụ metụtara ọnwụ gị. Ya mere site na mbipute 0.6.0 nke PUBG Mobile ị gaghị echegbu onwe gị gbasara «Teamkillers». Mara, kpachara anya na grenade.
Gbanwee shards maka ọla ọcha
N'ezie na PUBG Mobile ị na-ebibi ihe ndị ahụ had nwere oyiri iji chịkọta iberibe ma si otú ahụ nweta ụdị uwe dị iche iche. Ugbu a, enwere ike gbanwere mpekere ndị ahụ maka ọla ọcha. Nke a na-aghọ ego nke egwuregwu ịzụta ihe na ụlọ ahịa.
Otu ị ga - esi mee:
Gaa na ngwa ahịa gị.
Pịa na ibe na ị chịkọbawo ma bibie ha ka ị nweta nke ọlaọcha maka 1: 1.
Naanị ị ga-aga ụlọ ahịa wee hụ ihe ndị ị na-echekwa maka iberibe ọla ọcha.
Nwere ike ibugharị ihe niile na HUD
Ọzọ nke obere akwụkwọ akụkọ PUBG Mobile na-ewetara anyị na 0.6.0 ya bụ nke nwere ike gbanwee ihe ọ bụla nke HUD. Na mbụ, ị nweghị ike ịgbanwe, dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ nke bọtịnụ nkata. Ugbu a enwere ike, yabụ ị nwere ike ịhazi HUD n'ụdị egwuregwu gị. Otu n'ime obere mgbanwe ndị ahụ na-abata uru.
Gwuo Miramar na ọnọdụ Arcade
Ọ bụ ezie na nke a abụghị aghụghọ n'onwe ya, ọ bụ ihe ọhụrụ a hapụrụ ntakịrị na ndepụta zuru ezu nke mgbanwe na mmelite PUBG Mobile. Anyị na-ekwu maka gịnị Ọnọdụ Arcade dị ugbu a na map Miramar. Nnukwu ihe ọhụụ na eserese ngosi nke fọrọ nke nta ka ọ gbanwee ụdị egwuregwu dị ka enweghị ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ nke ndị egwuregwu nwere ike iri ari dị ka anụ ọhịa na-akpụ akpụ.
5 aghụghọ nke ọhụrụ PUBG Mobile melite na-ekwe ka mma agba Cha Cha ahụmahụ na na ị na-eleghị anya kpamkpam amaghị nke. Nwere ike itinye ha n'ọrụ ka ị nweta egwuregwu kachasị mma nke nwere ike ịgbanwe usoro egwuregwu egwuregwu ugbu a.
PUBG MOBILE: Nguzogide
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » PUBG Mobile » 5 aghụghọ nke ọhụrụ PUBG Mobile melite nke ị leghaara anya
Edemede dị mma nke isiokwu ahụ nyeere m aka ịmata mmelite na ọkachasị njikere nke ọnọdụ onye iro ma ọ bụ ihe na ndị otu gị
Daalụ! Chọpụta ọnọdụ ndị iro na ịchọta otu ihe maka ndị otu gị dị mkpa. Ọ bụrụ na anyị na-eji olu n'otu oge ọ ga-adị mfe karị. Anyị na-azọpụta onwe anyị ịkọwa ebe ha nọ.